Fanontaniana sy valiny ifanaovana amin’i Beñat Garaio, mpikatroky ny fiteny Basque · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2022 5:11 GMT
Sary nampindramin'i Beñat Garaio avy amin'i Zaldi Ero
Ao anatin'ny andian-dahatsoratra manasongadina ny asan'ny mpikatroka mampiroborobo ny fitenin'ny vitsy an'isa (zandriny mankatoa) Eoropeana sy ny teny isam-paritra amin'ny habaka ankihy, tianay ny hampiseho an'i Beñat Garaio (@BGaraio) izay miasa amin'ny fampiroboroboana ny teny Basque amin'ny alalan'ny fikarakarana fisantaran'andraikitra sy lanonana, fifaneraserana amin'ireo vondrom-parahamonina ampielezana ary fandraisana anjara amin'ny hetsika fanohanana akademika (oniversite). Monina ao amin'ny firenena Basque ao Espaina i Beñat.
Fantaro bebe kokoa momba ireo fisantarana andrailkitra ireo ao amin'ny resadresaka imailaka etoana nataon'ny Rising Voices.
Rising Voices (RV): Lazao anay ny momba anao sy ny asanao mifandraika amin'ny fiteninareo.
Beñat Garaio (BG): Nifantoka tamin'ny fandalinana hamelomana imaso indray sy amin'ny tsikerafitenim-piarahamonina vitsy an'isa (zandriny) ny asako fahatanora nefa mavitrika sy amin'ny fandaminana hetsika fanentanana sy fanaparitahana amin'ireo sehatra roa ireo. Nandamina na niara-nikarakara hetsika toy ny Hitz Adina Mintzo, HIGA (Vovonana ho an'ny Tanoran'ny Fiteny noterena ho Zandriny) ary Euskarabentura aho ary navitrika ihany tamin'ny famoahana sy fizarana ny asako oniversitera (akademika).
Nobeazina tamin'ny teny basque aho tao an-trano tao an-tanànako (Gasteiz), saingy tsy nampiasa izany tamin'ny namako na ny fiainako andavanandro aho raha tsy efa nifindra tany Idaho (Etazonia), izay ahitana vondrom-piarahamonina Basque lehibe iray ary talanjona aho tamin'ny ezaka nataon'izy ireo hiolokoloana ny fiteniny. Rehefa niverina an-tanindrazana aho dia nanomboka nandray anjara tamin'ny hetsika samihafa mandra-pifindrako tany Londres mba hahazoana ny MA amin'ny Fanohanana sy Fameloma-maso indray ny fiteny ao amin'ny Oniversite SOAS ary hanohy ny asa akademika ihany koa.
Nanomboka teo aho niroboka tamin'ny hetsika maro fa ny fampifandraisana ny tambajotram-piteny eo amin'ireo vondrom-piarahamonina manerantany no tena maharisika ahy indrindra
RV: Manao ahoana ny fiteninao amin'izao fotoana izao na an-jotra na ivelan-jotra?
BG: Fiteny mora fantatra eo amin'ny mpiteny, fitaovana ary fahafahana mianatra sy mampiasa azy ihany ny Basque. Na izany aza, miankina amin'ny faritra izany satria mizara ho faritra telo ny Firenena Basque (roa any Espaina ary iray any Frantsa) izay samy manana ny ambaratongam-pankatoavana azy ofisialy. Ary vitsy an'isa ny miteny Basque eto ary mety misy faritra midadasika aza izay zara raha ahenoanao teny Basque, fa amin'ny sasany kosa fiteny voalohany ny Basque.
Online speaking, Basque is one of the top-languages in some of the most important websites (e.g. Wikipedia, Twitter, etc.), but we have an overwhelming content in Spanish, French and English, in comparison with Basque. Amin'ny fitenenana an-tserasera, ny Basque dia iray amin'ireo fiteny ambony indrindra amin'ny sasany amin'ireo tranonkala manan-danja indrindra (ohatra ny Wikipedia, Twitter, sns), saingy manana votoaty be dia be amin'ny teny Espaniola, Frantsay ary Anglisy izahay, raha oharina amin'ny Basque.
Miteny Katalana ihany koa aho ary misy itovizana ireo fanamby sasantsasany eo aminay, na dia mihatsara kokoa aza ny Katalana amin'ny lafiny sasany (haja, habetsahan'ny mpandahateny, sns.).
RV: Inona no antony manosika anao hahita ny fiteninao amin'ny sehatra ankihy?
BG: Manao fikarohana aho miaraka amin'ireo ankizy avy amin'ny faritra be mpiteny Basque ary na dia amin'ny tranga misy azy ireo aza dia mahasarika azy ireo kokoa ny votoaty noforonina tany Etazonia, Italia, Korea, Arzantina. Miaina amin'ny sehatra roa amin'ny fiainanay izahay, andao hiantso azy ireo hoe habaka ara-batana sy habaka ankihy, fa ankafizina kokoa ny faharoa.
Tsy maintsy manao izay ahitana maso sy mampanintona anay anjotra izahay fiteny noterena ho zandriny manoa raha te hanam-bintana hitandro ny fiteninay, ny mari-panondroanay ary ny kolontsainay.
Miharihary fa tsy ho afaka mifaninana amin'ny famoahana farany amin'ny teny anglisy izahay, saingy tsy maintsy mitady ny fomba hahatonga ny fiteninay hahasarika. Fantatro fa misy fiainana bebe kokoa ivelan'ny aterineto, saingy tena mila mihetsika haingana amin'ity raharaha ity izahay: ireo ankizy voalazako ireo dia efa miteny anglisy na espaniola avy any Amerika Atsimo amin'ireo mpiara-mianatra aminy sy ny namany akaiky indrindra. Izany no antony manosika ahy, raha amin-kitsimpo, ankafizako ihany koa ny tambajotra sosialy sy mijery votoaty ankihy ary aleoko manao izany amin'ny fiteniko.
RV: Fariparito ny sasany amin'ireo fanamby izay manakana ny fiteninao tsy ho ampiasaina feno anjotra.
BG: Amin'ny teny anglisy, espaniola ary ampahany kely kokoa amin'ny teny frantsay ny zava-drehetra ary , farafaharatsiny, mahazo ireo fiteny tsy misy olana ny taranaka tanora. Raha ny marina, tsy manana mari-pamantarana mety hahavoahilika tahaka ny Basque ireo fiteny ireo ary heverina ho mahazatra sy/na lamaody ny fianarana, ny fitenenana sy ny fampiasana votoaty amin'ireo fiteny ireo.
Tsy ngeza tahaka ny ahoana ny vondrom-piarahamonm-piteny madinika tahaka ny Basque (700K mpiteny) handresen-dahatra ny orinasa lehibe hamokatra votoaty betsaka amin'ny fitenin'ny vitsy an'isa na dia betsaka aza ny angona ara-kolontsainay, dia azo lazaina fa tsy ampy ny mpanjifa votoaty Basque. Azo ampiharina amin'ny hira sy literatiora, ary amin'ny sarimihetsika, andian-tantara, tambajotra sosialy sy ny sisa.
Fantatray tsara io fanamby lehibe io ary fantatro fa misy vondrona maro miezaka ny hamadika ny toe-draharaha; na ny orinasa lehibe aza dia manao fifanarahana amin'ireo andrim-panjakana Basque mba hamorona votoaty amin'ny teny Basque. Dia hojerentsika ny fandehany fa tsy afaka ary tsy mety amiko ny ho kivy ambony ihany amin'ny zava-misy ankehitriny.
KS: Inona no heverinao ho dingana mivaingana handrisihana ny tanora hanomboka hianatra ny fiteninao na hanohy hampiasa azy io?
BG: Voalohany indrindra, tokony hanana hirika hianarana teny basque ny taranaka tanora hatramin'ny faha-3 taonany mandra-pahavitan'ny oniversite, satria tsy azo atao izany any an-kafa. Tokony ho afaka mampiasa ny fiteninay amin'ny toe-javatra rehetra ireo mpiteny basque ary , fara-faharatsiny, tokony mahazo ny fiteny ireo tsy mpiteny ka tsy manery ireo mpiteny basque hivadika hiteny espaniola na frantsay amin'ireo tranga ireo.
Tokony sady hahasarika no ilaina kokoa ny Basque mba hahazoana famirapiratana bebe kokoa ary ilaina ny andrim-panjakana (toeram-pianarana ambony) handray fepetra mahery-vaika/feno-herim-po mba ahafahana manao izany.
Raha any amin'ny habaka ankihy (dizitaly) indray, mila votoaty bebe kokoa amin'ny fiteny Basque izahay, amin'ny maha-mpiteny Basque anay, ary tsy maintsy manana fitaovana bebe kokoa hananganana votoaty amin'ny fiteninay manokana.
Mahatratra ny ambony indrindra amin'ny tantaranay ny fahaiza-mitenin'ny haraña (taranaka) farany indrindra, firenena manankarena ihany izahay ary tena tsara ny toetran'ny fiteninay. Avy amin'izany, iankinan'ny ain-dehibe ny manararaotra izany tombontsoa izany raha te hamelona indray ny teninay izahay.